Isondo Eliguqukayo Kwixa elizayo, ukugcwala kophuhliso lokuhamba kwezithuthi zombane kusemnyango. Njengomenzi wenxalenye yemoto, iMaxxis ihlala icinga ukuba ingayila njani na inkqubo enobulumko enokuthatha inxaxheba kule meko kwaye incede nokuyikhawulezisa. U-Razr yitayara elungiselelwe ukuphuhliswa kwesidingo. Izinzwa zayo ezakhelwe ngaphakathi zisebenza ngokuchanekileyo kwiimeko ezahlukeneyo zokuqhuba kwaye zinika imiqondiso esebenzayo yokuguqula isondo. Izinyuko ezikhulu ezandisiweyo kwaye zitshintshe indawo yoqhakamshelwano ekuphenduleni kwisiginali, ke phucula ukusebenza kwethayile.
Umenzi Weti Iluhlobo
Umenzi Weti Iluhlobo Ubunyani yinto eyenziwe yanamhlanje yokwenza umenzi egxile kukusebenzisa amava omsebenzisi. Iprojekthi ikakhulu ijolise kwizinto ezibonisa ubuhle kunye namava omsebenzisi njengoko eyona njongo iphakamisa imveliso ukuba yahluke kwiimveliso esele zikho. Idokodo lomenzi weti lincinci kunomzimba elivumela imveliso ukuba ijonge umhlaba ozisa isazisi esahlukileyo. Umzimba ojijithekileyo ngokuthe ngcembe kunye nendawo ethe tyaba uyabuxhasa ubuchwephesha bemveliso.
I-Chandelier I-Lory Duck yenzelwe ukuba ibe yinkqubo yokumiswa eqokelelwe kwiimodyuli ezenziwe ngobhedu kunye neglasi ye-epoxy, nganye ifana ne-duck ehamba ngokuhambahamba ngaphandle kwamanzi apholileyo. Iimodyuli zinikezela uzinzo; ngokuchukumisa, nganye inokuhlengahlengiswa ukujongana noluphi na ukhokelo kwaye ixhonywe nakuphi na ukuphakama. Ubume besiseko sesibane buzalwa ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, idinga iinyanga zophando kunye nophuhliso kunye neeprototypes ezingenakubalwa zokudala ukulingana kwayo kunye nokujonga okuhle kuzo zonke ii-angles ezinokwenzeka.
Ukukhanya Portal Ikamva Yesixeko
Ukukhanya Portal Ikamva Yesixeko Ukukhanya kwePortal kuyinto eyingqayizivele yeYibin Highspeed Rail City. Utshintsho lwendlela yokuphila yacebisa kubo bonke ubudala unyaka wonke. Ecaleni kwesikhululo sikaloliwe ohamba ngesantya esiphezulu i-Yibin esisebenza ukusukela ngeyeSilimela ngo-2019, iZiko laseYibin Greenland liquka i-Tm Towers engu-160m ende edityanisiweyo yohlanganiso lolwakhiwo kunye nendalo ngombala we-1km ubude boulevard. I-Yibin inembali iminyaka engaphezulu kwe-4000, ukuqokelelwa kobulumko kunye nenkcubeko njengendawo yokuhamba emlanjeni yaphawula ukukhula kweYibin. I-Twin Towers isebenza njenge portal ekhanyayo ukukhokela iindwendwe kunye nophawu lokuba abahlali bahlanganisane.
Ikliniki Yamazinyo UClinique ii yikliniki yabucala yabucala yenkokheli yezimvo kunye nokhanyayo ngubani osebenzisa kwaye ephanda kakhulu ngeendlela zobuchwephesha kunye nezixhobo kwingqeqesho yakhe. Abayili bezakhiwo babone umlinganiso wokufakwa ngokusekwe kubuchwephesha bokusetyenziswa kwezixhobo ezichanekileyo zonyango njengemigaqo yoyilo kuyo yonke indawo. Umphezulu wangaphakathi wodonga kunye nefenitshala zidityaniswa ngaphandle komthungo kwiqokobhe elimhlophe kunye nendawo ethe tyaba yekori etyheli apho kufakelwe khona itekhnoloji yonyango.
Haezer I-Albhamu Yokugquma Ubugcisa Tuesday 5 July
Up Ingqokelela Yokuhlambela Monday 4 July
Il Mosnel QdE 2012 I-Sparkling Yeileyibhile Kunye Nepakethi Sunday 3 July
Isondo Eliguqukayo Umenzi Weti Iluhlobo I-Chandelier Ukuqokelelwa Kwamabhinqa Ukukhanya Portal Ikamva Yesixeko Ikliniki Yamazinyo